Ny Amazfit-T-Rex vaovao, haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 8 Janoary | Androidsis
Tao anatin'ny roa taona lasa, maro ireo mpampiasa natoky ny maodely samihafa amin'ny smartwatches izay hitantsika eny an-tsena eo ambanin'ny marika Amazfit, marika iray an'ny mpanamboatra Huani izay an'i Xiaomi kosa, antoka fa maro ny mpanamboatra Aziatika hafa tsy manolotra anay.
Nandritra ny taona 2019, nandefa modely vaovao ho an'ny tsena i Huani,ny iray amin'izy ireo dia mitovy amin'ny Apple Watch, fa amin'ny ampahatelon'ny vidiny, zavatra izay efa fanaon'i Xiaomi antsika taloha. Na izany aza tsy izany foana no nitranga ary hanaporofoana izany, kasainy aseho modely vaovao hafa tanteraka: T-Rex.
Ny 8 Janoary ho avy izao, ny daty nitazomana ny CES, foara fampitahana teknolojia ho an'ny mpanjifa lehibe indrindra izay mety hanoloran'i Samsung amin'ny fomba ofisialy ireo Galaxy Note 10 Lite toy ny Galaxy S10 Lite.
Huani dia nanao ny fanambarana ity famelabelarana ity tamin'ny alàlan'ny Weibo, ny Twitter Twitter izay ahafahantsika mamaky (nadika avy amin'ny sinoa mazava ho azy): Miandry anao ny 8 Janoary ny karazana smartwatches vaovao ho an'ny eny ivelany. Ny silhouette dia mampiseho amintsika endrika izay mitovy amin'ny hita ao amin'ny Casio nentim-paharazana, ao anatin'ny G-Shock range.
Andro vitsy lasa izay dia tafaporitsaka ireo sary voalohany, tamin'ny alàlan'ny Xiaomi Today, amin'ity maodely ity, sary mampiseho ny hatevin'ny fitaovana (mitovy amin'ny an'ny teaser). Ny bezel sy ny tranga dia toa matanjaka, noho izany hanoherana ny rano sy ny vovoka izy io ary mety ho tohina na hidina ihany koa.
Tahaka ny ankamaroan'ny maodeliny, ity smartwatch vaovao ity dia ho afaka araho ny fitepon'ny fontsika sy izay karazana fanatanjahan-tena rehetra ny zavatra ataontsika, ao anatin'izany ny dingana, ny kaloria nodorana, ny torimaso natory ... Tsy mahalala na inona na inona momba ny vidiny isika amin'izao fotoana izao, saingy azo inoana fa manaraka ny andalana mitovy amin'ireo maodeliny lafo vidy kokoa izy io ary maherin'ny 100 mahery euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Amazfit- T-Rex vaovao, haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 8 Janoary
Ny Realme X50 dia mamakivaky ny Geekbench, manamafy ny mampiavaka azy
Samsung dia manoratra modely sivy amin'ny tsipika Galaxy A